Mhlophe kuWright Clare B&B
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguSue
USue ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-90% yeendwendwe zakutshanje.
Kuyandivuyisa ukwamkela uMhlophe kwisitalato iWright sabanini uFred & Simone. Le ndlu enamagumbi okulala amathathu ibekwe kakuhle izibini, amaqela okanye iintsapho, eyilelwe ukulala ukuya kuthi ga kwiindwendwe ezisi-8 ngokukhululeka. Ibekwe ngokufanelekileyo kanye kufutshane neRiesling Trail kunye nokuhamba kancinci ukuya kwisitrato esikhulu sedolophu.
Indlu ilula kwaye ikhanya, kwaye ngaphakathi ecocekileyo entofontofo. Kukho amagumbi okulala ama-3, onke anabalandeli besilingi, amagumbi ayi-2 okuphumla-enye inebhedi yesofa eyi-Queen, amagumbi okuhlambela ayi-2, ikhitshi, igumbi lokutyela kunye nempahla yokuhlamba.
Unyaka wonke ubushushu ngoko nangoko kunye nokupholisa nge-aircon yomjikelo obuyela umva kuzo zombini iindawo zokuhlala. kwakunye nesitovu sembiza yesisu esinokonwaba ngexesha lasebusika yinkuni iyancomeka kwaye igcinwe phantsi kwekhusi. Kukho ezinye iincwadi, imidlalo yebhodi kunye neeDVD zokukugcina uxakekile ngexesha lokuhlala kwakho.
Ngokuqinisekileyo abantwana bamkelekile kwaye baxhaswe ngezinto zokudlala ezininzi, i-cubby kunye ne-sandpit ngasese, ebiyelwe kwiyadi yangasemva.
Izilwanyana zasekhaya zamkelekile kwiyadi ebiyelwe ngokupheleleyo, ngokungqongqo hayi kwifenitshala kumagumbi okulala, nceda ucebise ukuba izinja zizale njengoko izinja ezinkulu kunye nezinja ezilahlayo azifanelekanga ukuhlala.
4.85 out of 5 stars from 36 reviews
4.85 · Izimvo eziyi-36
Indlu ikwisitalato sokuhlala esithe cwaka kufutshane neendawo zokutyela, iikhefi kunye neevenkile ezinkulu
Iindwendwe zinepropathi yazo nangona kunjalo ndihlala ndifowuna kude